EPS စနစ် ဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်အလုပ်အလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ရသင့်ရထိုက်သည့် ခံစားခွင့်ငွေများ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ကြေညာခြင်း ‹ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
EPS စနစ် ဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်အလုပ်အလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ရသင့်ရထိုက်သည့် ခံစားခွင့်ငွေများ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ကြေညာခြင်း
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ EPS စနစ်ဖြင့်ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကိုင်ခဲ့သည့်မြန်မာအလုပ်သမားများအနက်မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အပြန်ခရီးစရိတ် / လုပ်သက်ဆုငွေများ မထုတ်ယူခဲ့သည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ရသင့်ရထိုက် သည့် ခံစားခွင့်များ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန် အတွက် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီရုံး ၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ (၈)မိုင်၊ ပြည်လမ်း သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆက်သွယ်ကြပါရန် နှင့် နောက်ဆုံးကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း/မိတ္တူ ၊ ကိုရီးယား နိုင်ငံ တွင် ရရှိခဲ့သည့် ID Card မိတ္တူ ၊ ကာယကံရှင်၏ ဘဏ်စာအုပ် စသည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာပါရန် နှင့် ပူးတွဲပါ အမည်စာရင်းများ ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည် . . . . .
လျှောက်ထားနိုင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်း အပြည့်အစုံ သိရှိရန် . . . . . (2833)
EPS – TOPIK (Computer Based Test) စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အချိန်စာရင်းကြေညာခြင်း
Skill Test ဖွဆေိုရနျ စာမေးပှဲအခြိနျစာရငျးထုတျပွနျခွငျး
ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံတှငျ အလုပျလုပျကိုငျနသေော မွနျမာအလုပျသမားလုပျငနျးခှငျထိခိုကျမှုလြျောကွေးရရှိပွီး
စတုတ်ထအကွိမျ ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာမေးပှဲအောငျမွငျသူမြား အတှကျ အလုပျလြှောကျလှာချေါယူခွငျး
ပဉ်စမအကွိမျ EPS-TOPIK စာမေးပှဲအောငျမွငျသူမြားအား ကြှမျးကငျြမှုစမျးသပျစဈဆေးမညျ့ အစီအစဉျ မြား
သတ္ထမအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း
အဌမအကြိမ်၊ ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (EPS-TOPIK) အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း